Kobo Aura Famerenana iray. Endri-javatra, fahombiazana, tombony | Ireo mpamaky rehetra
Ity iray ity Kobo Aura One famerenana Io koa no Kobo voalohany nanandramako. Izaho dia niandry izany tamim-pientanam-po sy fanantenana lehibe ary nampanahy ahy izany satria rehefa manantena zavatra betsaka avy amin'ny zavatra iray ianao dia mandiso fanantenana ny tenanao. Nefa tsy maintsy milaza aho fa tsy diso fanantenana.
Nandinika tsara ny mpamaky nandritra ny volana maromaro aho. Ary tena nankafiziko izany. Raha vantany vao voarainao Ny zavatra voalohany nahavariana ahy dia ny habeny. Lehibe ve. Hiteny ho lehibe tokoa aho. Ianareo izay mitady mpamaky vaventy dia ho tian'izy ireo. Ireo 7,8 ″ mandeha lavitra. Indrindra rehefa zatra 6 ″
Manandrana ihany aho amin'ny farany marika iray mitovy amin'ny Kindle. Andao handeha miaraka amin'ireo toetra mampiavaka azy dia hiteny bebe kokoa aminao aho. Ary raha te hividy ianao dia jereo eto
Amin'ny faran'ny fandalinana dia misy galerie an'ny Kobo Aura One
3 Fihetseham-po sy endrika ivelany
4 Jiro sy menus
5 Fampidirana miaraka amin'i Pocket
6 Fitsapana fanoherana ny rano
8 Kobo Aura One gallery
Efijery kasihina 7,8
E ranomainty Letter HD.
Fanapahan-kevitra: 872 x 1404 teboka (H x V) / 300 dpi
Nanazava. Rafitra ComfortLight Pro
X X 163 116 8 MG
8 fahatsiarovana anatiny
Wi-Fi 802,11 b / g / n ary micro-USB
Seranana MicroUSB mandeha amin'ny herinaratra
Fahaleovan-tena: hatramin'ny 4 herinandro
Tano maharitra 60 minitra amin'ny halalin'ny 2 metatra IP8X
Manohana ny boky misy atiny arovan'ny Adobe DRM
Tonga ao anaty boaty semi-hentitra misy fanokafana amin'ny sisiny. Esorina toy ny boaty misy rakitsoratra boky izy io. Tena mahazo aina sy mora raisina.
Ao anatiny dia manana boaty henjana tena tsara isika miaraka amam-baravarana eo aloha, toy ireo mandritra ny androm-piainany. Alohan'ny hanokafana azy dia efa hitantsika fa ho lehibe ny ao anatiny.
Raha fintinina dia voavaha tsara ny fonosana sy ny fampisehoana azy.
Fihetseham-po sy endrika ivelany
Rehefa manasongadina mandritra ny famakafakana aho dia fitaovana lehibe izy io, 7,8 santimetatra izy ireo, sarotra ny mitazona amin'ny tanana iray. Tsy manana tontonana ilany ho an'ny fihodinan'ny pejy izy io, malemy paika ny zava-drehetra, fa amin'ny fanamboarana dia azontsika atao ny mamaritra faritany samihafa hampavitrika ny menus sy ny pejy. Ny bokotra tokana dia ny bokotra herinaratra ao aoriana.
Ny chassis dia vita amin'ny plastika, misy fangejana ny lamosina izay raha ny fahitako azy dia manintona tokoa. Manana fihazonana tsara ary tsy solafaka am-pelatanana.
Rehefa miteny aho hoe lehibe dia midika hoe lehibe. Eto ianao dia afaka mahita sary miaraka amin'ilay 7 ″ Kindle Oasis vaovao. Eto ianao dia afaka mahita miaraka ireo firavaka satro-boninahitr'i Kobo sy Amazon Kindle
Ny fampitahana iray hafa dia miaraka amin'ilay 6 ″ Kobo Clara vaovao, habe iray efa mahazatra antsika ary ho mora amintsika ny mampitaha azy io.
Jiro sy menus
Ny jiro dia tena tsara na eo aza ny efijery lehibe toy izany. Tonga miaraka amin'ny ComofortLight Pro hampihena ny jiro manga
Azontsika atao ny misafidy ny hazavan'ny mazava sy voajanahary amin'ny mandeha ho azy. Ho an'ny famirapiratana dia ampiasao sensor sensor manodidina. Miaraka amin'ny hazavana voajanahary dia mametraka ny lokon'ny jiro amin'ny halavirana avy amin'ny volomboasary amin'ny alina mankany amin'ny tara-pahazavana fotsy mazava be mandritra ny andro.
Tena mety sy mora ny mivezivezy amin'ny menus ary manova ny toetran'ny mpamaky. Na dia mbola tsy nikasika Kobo aza ianao dia efa zatra izany avy hatrany ary mankafy ny rafitra matanjaka sy marin-toerana.
Fampidirana miaraka amin'i Pocket
Tiako ny fampidirana Pocket. Manampy izay lahatsoratra hitanao amin'ny Internet ianao ary te hamaky amin'ny Pocket ary rehefa mampifandray ianao dia manana azy ireo ao amin'ny mpamaky. Tsotra be satria ny manampy am-paosy dia ny manindry bokotra iray amin'ny browser na mizara amin'ny telefaona finday ary misafidy an'ity serivisy ity.
Ny tokana saingy napetrako dia ny Pocket dia ampiasaina hitahiry fampahalalana marobe marobe ary tsy zavatra tianao hovakiana foana izany. Imbetsaka isika no mitahiry loharano, tranokala, horonan-tsary na sary ary Tsy hitako izay teboka handrindrana ny zava-drehetra. Tokony avelanao hisafidy ireo tags izahay mba hampifanarahana. Efa nitady azy tsara aho fa tsy nahita an'ity safidy ity.
Raha mieritreritra ny fomba hanamboarana an'io aho dia tsy afaka mieritreritra ny hanana kaonty Pocket roa, ny voalohany sy ny ambaratonga faharoa, mampiasa ny voalohany ianao amin'ny zavatra rehetra ary raha manao ireo izay nasianao marika amin'ny fomba manokana dia halefa any amin'ny kaonty faharoa izay ho ilay ampifanarahinao amin'ny Kobo. Izy io dia «botch» ary mampanantena aho fa hanazava izany amin'ny lesona an-tsekoly izao dia ekenay fa mampifangaro ny zavatra rehetra izy io. Ny drawbacks dia ambany lavitra noho ny tombony.
Fitsapana fanoherana ny rano
Tsy vitako ilay fandinihana tsy misy fanandramana fanoherana rano. Mety ho maro loko kokoa izy io tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary, fa andao handeha tsy hanana olana. Naroboka nandritra ny minitra maromaro aho ary mitohy mandeha tsara ny zava-drehetra.
Mihaona amin'ny Famaritana IP8X izay midika hoe 60 minitra amin'ny halalin'ny hatramin'ny 2 m.
Hitako ho mpamaky eveta lehibe io. Tena tsara ny zavatra niainana. Fiasan-tsiranoka tena izy amin'ny fanombohana, ny pejy fihodinana, ny fikarohana, ny fanoratana amin'ny fanamarihana sns sns. Ny jiro koa dia tsara ary ny fampiasana dia tena tsara, raha vantany vao mikasika azy kely ianao dia zatra ny meno Kobo.
Izaho manokana dia tiako ny fampidirana Pocket na dia hanatsara kely aza izany hoy aho. Na dia manana magazay manokana ho an'ny fivarotana ebook aza i Kobo, dia tsy matanjaka toa ny fampidirana an'i Amazon amin'ny Kindle sy ny katalaoginy.
Amin'ny haavon'ny batterie, fampisehoana mahazatra, herinandro maromaro izay tsy tokony hanahirana antsika.
Ny hany zavatra heveriko fa tokony hotadidintsika dia fitaovana lehibe izany. Tsy izany no mety hitaterana azy isan'andro na hamaky eo am-pandriana. Fa eto dia miankina amin'ny tsiron'ny tsirairay avy.
Azonao atao vidio eto.
Kobo Aura One gallery
Ny sary rehetra tao amin'ny galeriana dia nalaina tao amin'ny Roman Theatre ao Sagunto ary ny asa eo amin'ny fonony dia mpanenona nataon'i Nina Allan natontan'ny trano fanontana Fata Libelli efa tsy miasa intsony ankehitriny. Izy io dia fampifanarahana maoderina ny angano Arachne. Ankafizo!
Famerenana ny: Nacho Morató
ny fiasa izany
Size raha tianao ny mpamaky lehibe be
Jiro sy fampisehoana
Fampiasana tena tsara
Ny vidiny mety tafahoatra
Raha tsy tianao ny ereaders lehibe dia tsy natao ho anao izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » eReaders » Kobo Aura One famerenana
Misaotra ny hevitrao Nacho. Nanana Kindle Oasis vaovao aho nandritra ny iray volana ary toa nahagaga. Mahagaga fa ohatrinona ny fampisehoana inch hafa raha ampitahaina amin'ny 6 ″… ary ity mbola lehibe kokoa aza.
Ho ahy manokana, ary raha tsy nanandrana ny Kobo aho dia nisafidy ny Oasis satria matetika aho no mamaky mandry ary ny ergonomika an'ny Kindle toa mety aminy. Raha izany, ny olan'ny hazavana misy loko malefaka kokoa dia toa fahombiazana izay heveriko fa maka fotoana handinihana i Amazon.
Fanontaniana vitsivitsy raha tsy maninona ianao:
- Toy ny Kindle ve ny rafitra fitehirizana? Raha lazaina amin'ny teny hafa, mifototra amin'ny "famoriam-bola" ve izany na azonao atao ny mametraka folder mivantana avy amin'ny pc toa ny fahatsiarovana USB?
- Ahoana ny amin'ny rakibolana? Efa manana iray tafiditra ao ve ianao? Espaniola
- Azo atao ve ny mametraka boky novidiana tany Amazon na ny fampiasana ny Kindle Unlimited na ilay Kindle Prime vao nivoaka vao haingana ?. Heveriko fa tsy na farafaharatsiny tsy mora fa ny manontany fotsiny ...
Nacho Morató dia hoy izy:
Salama Hi. Valiako.
- Ny famoriam-bola dia azo atao mba hamoronana boky vondrona ananantsika amin'ny fitaovana. vita amin'ny menusin'izy ireo izany. Azonao atao ny mampakatra fampirimana na rakitra mivantana amin'ny ereder ao amin'ny PC, manaiky ny boky izy fa tsy ny hierarchy, izany hoe raha mametraka folder 2 misy boky 4 avy ianao dia hahita boky 8 ary raha te hanafatra azy ireo ianao dia manana hanao azy ireo avy amin'ny menio fanangonana.
- Mitondrà rakibolana sy mpandika teny, nampiditra Espaniola, Anglisy ary Espaniôla-Anglisy aho ary misy safidy amin'ny fiteny maro avy amin'ny menio fikirakira
- Eny, azonao atao ny mametraka boky avy any Amazon, ampidininao izy ireo ary ao izy ireo .azw3 ampakarinao amin'ny caliber izy ireo ary afindrao any amin'ny kobo ary ahodina azy ireo hatrany amin'ny .epub, mandeha ihany izahay raha toa ka manana epub ianao ary te-hametraka azy ao anaty afo ianao. Mazava ho azy, azw3 tsy mamaky azy ireo mivantana Ary ny lohahevitry ny Kindle tsy voafetra ary tsy mbola nojereko fa mieritreritra aho fa tsy azo atao, tsara fa tsy mivantana, angamba raha avelany hampidina boky ianao dia afaka manao toy izany koa, fa tsy haiko.
Izay angatahinao amiko dia mbola manana azy hijerena sy hanaporofoana aho
Valiny tamin'i Nacho Morató
Ny tena marina dia tsy ho azoko mihitsy ny filozofia Kindle sy Amazon tsy avelako hiasa ny fitaovan'izy ireo satria ny dragona USB sy ny lahatahiry azo sintomina avy amin'ny pc. Izany dia nataoko tamin'ny Papyre 5.1 taloha ary io no fomba tsara indrindra sy ahazoana aina indrindra tsy misy fisalasalana.
Azo antoka fa misy antony tsara ... fa tsy haiko.
Misaotra tamin'ny famerenana, mahaliana sy vita tsara. Fanontaniana iray fa: "Na dia manana magazay manokana hivarotana boky aza i Kobo dia tsy dia matanjaka toa ny fampidirana an'i Amazon amin'ny Kindle sy ny katalaoginy"
Inona no dikan'ity ? Raha tsy diso aho dia manana boky 6 tapitrisa mahery i Kobo ary tsy nanambara zavatra hafa velively i Amazon. Fahamarinana?
Raha ny fanazavana, toa somary matanjaka ihany koa aho fa misy resaka momba ny vidiny tafahoatra nefa tsy mbola noresahina tamin'ny Oasis izany, izay lafo kokoa! Manantena aho fa tsy ara-barotra izany ary noho izany tsy dia misy tanjona.
Mampalahelo fa tsy ny haben'ny boky no zava-drehetra. Raha ny "ecosystems" no resahina dia matanjaka be i Amazon. Betsaka ny olona misafidy ny handrehitra noho ny habetsaky ny tolotra, ny boky navoakan'ny tenany, sns. Izay eo. Izy ireo koa dia manana Kindle Unlimited, tahan'ny fisaka hamakiana boky ary ilay Kindle Prime vao natomboka vao haingana, izay manome anao boky maimaim-poana raha toa ianao ka praiminisitr'izy ireo. Amin'ity lafiny ity dia tsy hitako fa misy orinasa afaka miatrika an'io.
Etsy ankilany. Miresaka mpamaky lafo vidy aho, satria € 229 ho an'ny ereader dia vola be nefa tsy mampitahanao izany amin'ny orinasa rehetra. Misy mpamaky hafa ao Kobo izay mora vidy kokoa, toy ny Kobo Clara HD navoakan'izy ireo tamin'ny 5 Jona. Raha tsy miresaka momba ny vidin'ny Oasis aho dia satria famerenana ny Aura One. Afaka tapa-bolana dia hisy ny famakafakana ny Kindle Oasis vaovao sy taloha ary ho hitanao ny hevitro momba ny vidiny. avo ve izany. Na dia efa fanapahan-kevitry ny tsirairay aza izany.
Ah, tsy lahatsoratra ara-barotra ireo. Izy ireo dia famakafakana na famerenana, mamela anay ny vokatr'izy ireo ny marika mba hahafahantsika miresaka momba azy ireo malalaka. Ary izany no ataontsika. Mazava izany fa subjectif. Izany no antony anaovana famerenana.
Patroclo58 dia hoy izy:
EReader tena tsara, amam-bolana maro ananany (boky 7 mahery no vakina) ary mandeha tsara izy io. Marina daholo ny zavatra tsara lazain'izy ireo momba azy.
Aza avela hampatahotra anao ny habe, noho ny fisian'ilay pejy vaky azo amboarina, raha mbola tsy manana tanana kely dia kely ianao dia tokony ho afaka hamaky iray fotsiny.
Tsy izany koa ny 232gr-ny. (izay lanjaiko) no zavatra lehibe.
Rehefa te-hamaky aho rehefa misakafo irery (na miaraka amin'ny kafe) ary satria fitaovana "matanjaka" handaozako ny trano izany, dia nasiako iray amin'ireo fonosana karazana "Origami" izay, ankoatry ny fanomezana fiarovana fanampiny, avelao hijoro irery izy io, eny, ampio 116gr. lanja fanampiny
Raha ny momba ny tontolo iainana ... dia, amin'ny maro; mahafinaritra ny manana safidy.
Ny olana tokana tokony homarihina: Rehefa miala amin'ny efijery 6 ″ ianao dia sarotra ny miverina any aminy.
Mertxe dia hoy izy:
Salama, manana Kobo Aura One aho ary satria tsy dia nazava tsara momba ny fomba nampidirana boky (nanana papyre taloha aho) dia nampakatra azy ireo mivantana. .Fa tsy fantatro izay mitranga fa rehefa te-hahita fonony aho hisafidianana boky ... aorian'ny pejy telo dia voasakana aho. Efa namaky momba ny fandefasana ireo boky amin'ny Caliber aho. Azonao atao ve ny manazava amiko tsikelikely ny fomba tokony hanaovako azy? Misaotra anao!!!
Mamaly an'i Mertxe
Mametraka Caliber ianao (https://calibre-ebook.com/)
Rehefa mihazakazaka azy amin'ny voalohany ianao na aoriany ao amin'ny "Préférences> Run wizard", dia asehonao fa hampiasa Kobo Aura ianao
Vakio ny boky torolàlana raha azonao atao na mankany https://calibre-ebook.com/help
Ampidiro ao ny bokinao, izy no handamina izany ho anao.
Miaraka amin'ny Caliber mihazakazaka, ary efa miaraka amina boky, ampifandraisinao ny Kobo anao (voampanga, naverina, teo amin'ny efijery an-trano) tamin'ny alàlan'ny USB tamin'ny PC.
Ny Kobo dia tokony hilaza aminao ny tsindry "Solosaina hita maso" [Connect] ary hiteny hoe "Mifandray sy mameno"
Ao amin'ny PC dia tokony hosokafana ny fampirimana fakany Kobo ary ao amin'ny Caliber dia misy tsanganana "On device" ary misy kisary roa "Send to device" sy "Device".
Misafidiana boky iray, kitiho ny kisary «Alefaso amin'ny fitaovana», avereno ireo boky tadiavinao
Raha tsindrio ny kisary "Device" dia tokony hiseho ireo boky nafindranao. Miorina eo ankavanan'io kisary io dia misy zana-tsipika kely midina, rehefa manindry ianao dia manome anao ny safidy "Esory ity fitaovana ity", tsindrio raha hanao izany.
Ny Kobo dia tokony hiverina avy hatrany eo amin'ny efijery lehibe, esory ny USB.
Mety ho elaela vao manavao ny mpamaky (2 minitra farafahakeliny isaky ny boky), avelao irery izy dia ataovy.
Tokony ho afaka hamaky ny bokinao izao ianao.
Mitandrema, ny fonony izay tsy miseho tsara dia mety noho ny tsy fahombiazan'ny fametrahan'ireo boky, raha mitohy ny olana dia mankanesa any https://www.epublibre.org/ misintona ePub ary zahao, raha tsy izany, lazao amiko eto.
Salama, eto miresaka momba an'i Caliber isika https://www.todoereaders.com/calibre-portable.html
Omar El Kadri dia hoy izy:
Salama Nacho, tena nanampy ahy ny lahatsoratrao. Fa mitady mpamaky boky afaka mamaky PDF am-pilaminana aho. Manontany anao aho, mety ve ilay Aura One amin'ny famakiana amin'ny PDF? Raha tsy izany, iza ny mpamaky boky toa ny mahomby indrindra vakina ao amin'ny PDF. Avy sahady dia misaotra betsaka. Omar
Valiny tamin'i Omar El Kadri
Salama Omar. Mampalahelo fa mbola tsy nanandrana mpamaky boky izay mampiasa PDF aho. Eny, azo vakiana izy ireo saingy satria tsy mifanaraka amin'ny haben'ny efijery ny antontan-taratasy dia mila manao zavatra hafahafa foana ianao ary mampatahotra ahy izany. Ilay Aura One dia manana tombony amin'ny haben'ny efijery, saingy mbola tsy hanome soso-kevitra azy hamaky pdf aho, na amin'ireo mpamaky amin'ny android sy ireo mpijery samihafa dia nahazo traikefa tsara aho
Ho an'ireo magazine, taratasy ary pdfs hafa novakiako, izay tsy boky dia mampiasa tablette aho. Ary ny boky na mandeha amin'ny endrika ara-batana na epub, mobi sns, endrika nomerika aho.
Amazon Prime Reading, tahan'ny fisaka vaovao ho an'ny ebooks?